Ọrụ dịịrị anyị | Sichuan Groupeve Co., Ltd.
Ọrụ ndị mmadụ, ọha mmadụ na gburugburu ebe obibi
Taa "ọrụ mmekọrịta mmadụ na ụlọ ọrụ" bụ egbugbere ọnụ kachasị mma gburugburu ụwa. Kemgbe ntọala ụlọ ọrụ ahụ na 2010, maka Groupeve ibu ọrụ nke ndị mmadụ na gburugburu ebe obibi arụwo ọrụ kachasị mkpa, nke na-abụkarị nchegbu dị ukwuu maka onye guzobere ụlọ ọrụ anyị.
Ọrụ echedoro / Mmụta ogologo oge / Ezinụlọ na Ọrụ / Ahụike ma dabara adaba na ezumike nka. Na Groupeve, anyị na-etinye ndị mmadụ uru pụrụ iche. Ndị ọrụ anyị bụ ihe mere anyị ji bụrụ ụlọ ọrụ siri ike, anyị na-asọpụrụ ibe anyị na nkwanye ugwu, ekele, na ndidi. Anyị dị iche iche ndị ahịa na-elekwasị anya na uto nke ụlọ ọrụ anyị ga-ekwe omume na ndabere a.
Ngwaahịa na-echekwa ume / Ihe nchekwa gburugburu ebe obibi / ationgbọ njem na-aga nke ọma
Maka anyị, kpuchido ọnọdụ ibi ndụ dị ka ike kwere anyị. N'ebe a, anyị chọrọ inye onyinye na gburugburu ebe obibi na ngwaahịa anyị na mmepụta ha, ọtụtụ mmadụ ga-eji akwa anyị iji melite arụmọrụ nke ọfịs na ụlọ obibi.
Ka anyị hụ ihe okike n’anya; ka anyi tuo anwu.
Enyemaka Ala Ọma Jijiji / Nye onyinye na ihe nchebe / Ọrụ ebere
Groupeve na-ebukarị oke ọrụ maka nchegbu nke ọha mmadụ. Anyị na-esonye na mbelata ịda ogbenye. Maka mmepe nke ọha mmadụ na mmepe nke ụlọ ọrụ n'onwe ya, anyị kwesịrị itinyekwu uche na mbelata ịda ogbenye ma bulie ibu ọrụ nke mbelata ịda ogbenye.